Elephone Vowney, ny terminal mahery indrindra an'ny mpanamboatra | Androidsis
Elephone Vowney, ny terminal mahery indrindra an'ny mpanamboatra sinoa
alexis martinez | | Android Android, About us
Ny mpanamboatra sinoa Elephone dia manome betsaka horesahina amin'ity taona ity. Tsy mpanamboatra izay eo amin'ny haavon'ny mpamokatra sinoa hafa toa an'i Xiaomi, Meizu na OnePlus, fa manao zavatra tsara tokoa izy tato ho ato, noho izany ny orinasa dia mety hanana dingana avo lenta amin'ny vokatra vokariny ary koa hatokisan'ny mpampiasa azy bebe kokoa. .
Nandritra ity taona ity dia hitantsika ny fomba nanombohan'ny orinasa finday avo lenta finday avo lenta, anisan'izany ny P7000 sy P8000, izay angamba ny terminal fivarotana lehibe indrindra an'ny orinasa. Fa ankoatr'izay dia mikasa ny hiditra amin'ny tontolon'ny akanjo azo entina ny orinasa ary noho izany dia hamoaka rindrambaiko finday miaraka amin'ny Android Wear, ny Elephone Ele Watch.
Nikasa ny hanohy hanaporofo ny Elephone fa mpanamboatra tsara izy io izay afaka mijoro amin'ireo mpanamboatra hafa ao amin'ny firenena maotera aziatika. Noho izany, antenaina fa alohan'ny faran'ny taona dia hisy fantsona avo lenta roa avoaka avoaka, ny P9000 sy ny Vowney, izay horesahintsika etsy ambany.
Ity fitaovana ity dia nomena anarana hatramin'ny fahavaratra rehefa nivoaka ilay horonantsary izay hitanao eo an-tampon'ny lahatsoratra. Ankehitriny ny terminal dia efa misy ahafahana manao famandrihana mialoha ary noho izany dia fantatsika ny antsipiriany momba izay ho terminal matanjaka indrindra, hatramin'izao, avy amin'ny Elephone.
Marihina fa ny fitaovana dia manana karazany roa miankina amin'ny fahatsiarovany RAM, noho izany dia hahita karazana ambany sy farany mora vidy isika amin'ny lafiny farany ambony. Ny Elephone Vowney dia manana a 5 santimetatra miaraka amin'ny vahaolana QHD (2560 x 1440 teboka) izay adika amin'ny hakitroka 535 ppi. Mikasika ny elanelana ambany izay noresahintsika tetsy ambony, dia mitovy ny haben'ny efijery saingy ny 1080p dia manana ny valiny.
Ao anatiny no ahitantsika ilay mpanodina Helio X10 na, antsoina koa hoe MT6795, nataon'i MediaTek sy GX6650 GPU. Miaraka amin'ity SoC ity, ny fahatsiarovana RAM 3 na 4 GB dia afaka miaraka aminy arakaraka ny kinova tianao hividy. Ao amin'ny sehatry ny sary dia misy fakantsary lehibe hita ao aorinan'ny 21 Megapixels miaraka amin'ny sensor Sony IMX230, miaraka amina flash LED roa tonta. Eo an-damosintsika ihany koa dia mahita scanner an'ny dian-tanana isika.
Anisan'ireo toetra manan-danja hafa hitantsika ny fahaizan'ny batterie 4.000 Mah, Dual-SIM izy, manana fifandraisana 4G / LTE, manana tahiry anatiny 16 GB ao amin'ny kinova RAM 3 GB sy tahiry anatiny 32 GB ao amin'ny kinova RAM 4 GB, izy rehetra dia mety hivelatra ny fahaiza-manao amin'ny alàlan'ny slot microSD. Ary farany fanamarihana fa ny fitaovana dia ho eo ambanin'ny Android 5.1 Lollipop ary mbola ho hita eo raha manavao ny Elephone amin'ny Android 6.0.
Mikasika ny vidiny sy ny fahafahany, ny Elephone Vowney dia azo vidiana manomboka ny 25 Oktobra ary afaka manana vidiny ambany noho ny 300 € ary izany, rehefa mahita ny masontsivana momba ilay fitaovana, dia hiatrika terminal lehibe mifaninana izahay raha oharina amin'ny fifaninanana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Android Android » Elephone Vowney, ny terminal mahery indrindra an'ny mpanamboatra sinoa
Jaravivi dia hoy izy:
Aiza no mety hividiananao ity finday ity?
Mamaly an'i Jaravivi
@ guillermo11888 dia hoy izy:
Amidy amin'ny AliExpress amin'ny € 278,58 / andiana varotra atsipy am-paosy
Mamaly an'i @ guillermo11888
Famerenana sy famakafakana ny Leagoo Elite 1, terminal lehibe iray amin'ny vidiny mihomehy
Sary bebe kokoa sy ny sisa amin'ireo famaritana tafaporitsaka an'ny Nexus 5X izay ho tonga amin'ny vidiny $ 379